လီဟွန်းဝူ - ဝီကီပီးဒီးယား
လီဟွန်းဝူ(၂၃ မတ် ၁၉၉၃ မွေး)သည် တောင်ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော် ဖြစ်သည်။ အသက်ကိုးနှစ်သားအရွယ်မှစ၍ ကလေးသရုပ်ဆောင် အဖြစ်နှင့် အနုပညာခရီး စခဲ့သည်။ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ ဖြစ်သော အီဂျီမဲပြန်လာခြင်း(၂၀၀၉)နှင့် ဘုရင်မဆွန်ဒွတ်(၂၀၀၉)တို့၌ ပါခဲ့သည်။ စာကြမ်းပိုး(၂၀၁၀)နှင့် လှပတဲ့မင်းသို့(၂၀၁၂)တို့၌လည်း အထူးပါခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ရုပ်ရှင် သိုသိပ်စွာ၊ကြီးမြတ်စွာ၌ မြောက်ကိုရီးယားစပိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ ရုပ်ရှင် လိမ်ပညာရှင် ၌ ဉာဏ်ကြီးရှင်ဟက်ကာအဖြစ်လည်းကောင်း လူသိများသည်။ ၂၀၁၆ တွင်မူ၊ သူ၏ ပထမဆုံး အဓိကဇာတ်ရုပ်ရသည့် ကေဘီအက်စ်၂ ၏ မူးရင်းကျောင်းတော်၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
(1993-03-23) မတ် ၂၃၊ ၁၉၉၃ (အသက် ၂၈)
၁.၁ ၂၀၀၅-၂၀၁၁၊ အစ
၁.၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၇၊ လူကြိုက်များလာခြင်း
၄.၁.၁ As featured artist
၄.၁.၂ As collaborating artist
ဒဏ္ဍာရီ၊ မင်းကြီးဆယ်ဂျုံး၊ အီဂျီမဲပြန်လာခြင်းနှင့် ဘုရင်မဆွန်ဒွတ်စသော ဇာတ်အိမ်ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်ရေးများစွာ၌ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ 
ဂျပန်ကာတွန်း ဇကုရနဂါးကို မှီငြမ်းသော စာကြမ်းပိုး၌ စတင်ကျော်ကြားလာသည်။
၂၀၁၁ ၌ သူနှင့် ကေပေါ့အဆိုတော် ယူးဒူဂျူး(ဘီတူးအက်စ်တီအဖွဲ့မှ)တို့သည် ဂျေတီဘီစီ အခပေးချယ်နယ်မှ လွှင့်သော Music on Top တေးဂီတအစီအစဉ်၌ တင်ဆက်သူ လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ၌ ဂျပန်မန်ငကာတွန်း ဟာနကိမိကို မှီငြမ်းသော လှပသောမင်းသို့၌ ရှုအိချိ နကတုစ်နေရာ၌ ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်သည်။  ဆယ်လီဘောအသင်း အက်ဖ်စီသူရဲကောင်းများ၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည့်နှင့်အညီ ဘောကန်အခန်းများ၌ လူစားမထိုးဘဲ ကိုယ်တိုင် ကန်သည်။ ပြည်တွင်း၌ ပြသစဉ်က အမှတ်သိပ်ရမသော်လည်း လှပသောမင်းသို့သည် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် တရုတ်တို့တွင် လီကို ကိုရီးယားကြယ်ပွင့်အဖြစ် လူသိများစေခဲ့သည်။
လျှို့ဝှက်စွာ၊ကြီးမြတ်စွာ၌ အထက်တန်းကျောင်းသားရုပ်ဖျက်ထားသော စပိုင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရာ အထူးပေါက်သွားသည်။ ထိုကား၏ဇာတ်ဝင်တေး "Ode to Youth" ကိုလည်း လီကိုယ်တိုင်ဆိုသည်။
ယွန်ပြောင်းဒုတိယတိုက်ပွဲအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ၂၀၁၅ ရေတပ်သဲဖို ဇာတ်ကား မြောက်ပိုင်းကန့်သတ်မျဉ်း၌ သရုပ်ဆောင်ရာ ၎င်းရုပ်ရှင်သည် လက်မှတ်ပေါင်း ၆၀၂၄၈၉၄ စောင်(အသားတင်အမြတ် ၃၈၉၄၅၂၃၁ ဒေါ်လာ) ရောင်းရခဲ့ကာ၊ ၂၀၁၅ ၏ လူကြည့်အများဆုံးကိုရီးယားရုပ်ရှင် ဖြစ်ခဲ့သည်။  
၂၀၁၆ ၌ လူငယ်ကြိုက်ဇာတ်လမ်း မူးရင်းကျောင်းတော်ကို ရိုက်ကူးရာ မူလက အပိုင်း ၂၀ စီစဉ်ထားသော်လည်း ရိတ်အမှတ်နည်းသည့်အတွက် ၁၆ ပိုင်းသို့ လျှော့ချခဲ့ရသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
2007 The Legend young Cheoro MBC
Lobbyist young Harry SBS
2008 King Sejong the Great Prince Choong-nyeong KBS1/KBS2
Things We Do That We Know We Will Regret Lee Jeongh-wook KBS2 Episode 4: OnaNight Sparkling with Stars
Queen Seondeok young Kim Yushin
2010 Master of Study Hong Chan-doo KBS2
2011 Gyebaek young Gyebaek MBC
Brain Park Dong-hwa KBS2 Guest appearance in episodes 1-4
2012 Man from the Equator young Kim Sun-woo
To the Beautiful You Cha Eun-gyul SBS Korean adaptation of Hana-Kimi
2015 Run Toward Tomorrow Kang Moon-jae Lunar New Year special
Scholar Who Walks the Night Prince Jeonghyeon MBC Cameo appearance in episode 1
2016 Moorim School Yoon Shi-woo KBS2 First Lead Role
2017 The Liar and His Lover Kang Han-kyeol tvN Korean remake
TBA The Most Beautiful First Meeting Gao Song Dragon TV Chinese web drama
A Dirty Carnival young Min-ho
2007 Hwang Jin Yi young Nomi
2010 The Loneliness of Butcher Boy Tae-shik short film from Short! Short! Short!
2015 Northern Limit Line Park Dong-hyuk
2005 "Jump" Haha
2013 "I Love You" Akdong Musician
2016 "Ordinary Love" KCM
December 8, 2011 – March 14, 2012 Music on Top jTBC
December 16, 2012 – January 26, 2014 Inkigayo (Popular Song) SBS
2012 Invincible Youth Season2KBS2 Appeared as guest in episode 26
Strong Heart SBS Appeared as guest in episode 142&143
2013 Running Man Appeared as guest in episode 147
Hwasin – Controller of the Heart Appeared as guest in episode 22
2014 Lee Hyun-woo and Park Ji-bin's Real Mate in Saipan QTV travel/reality show with Park Ji-bin
Running Man SBS Appeared as guest in episode 147 & 225
2015 Happy Together Season3KBS2 Appeared as guest in episode 401
2016 Hello Counselor KBS World Appeared as guest in episode 257
2010 Footloose Ren McCormack
As featured artistပြင်ဆင်
"Your Face" (feat. Louie of Geeks)
2016 54 — Non-album single
As collaborating artistပြင်ဆင်
(with O Broject; feat. Lee Hyun-woo, Bromance)
2013 — — Secretly, Greatly OST
2016 — — Moorim School OST Part. 3
(Joy featuring Lee Hyun-woo)
2017 TBA The Liar and His Lover OST
2008 KBS Drama Awards Best Young Actor King Sejong the Great ဆုရရှိ
2012 Best New Actor Man from the Equator ဆန်ကာတင်
SBS Drama Awards New Star Award To the Beautiful You ဆုရရှိ
2013 22nd Buil Film Awards Best New Actor Secretly, Greatly ဆန်ကာတင်
34th Blue Dragon Film Awards ဆန်ကာတင်
SBS Entertainment Awards Best Newcomer Award Inkigayo ဆန်ကာတင်
2014 9th Asia Model Festival Awards New Star Award Secretly, Greatly ဆုရရှိ
16th Seoul International Youth Film Festival Best Young Actor ဆန်ကာတင်
2015 52nd Grand Bell Awards Best New Actor Northern Limit Line ဆန်ကာတင်
30th Korea Best Dresser Swan Awards Rising Star Award ဆုရရှိ
2016 49th WorldFest-Houston International Film Festival Best Supporting Actor Award ဆုရရှိ
↑ Lee Hyun-woo။ Korean Film Council။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee Hyun-woo, life right now။ Tenasia via Hancinema (2015-08-13)။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wee၊ Geun-woo။ "Interview: Actor Lee Hyun-woo - Part 1"၊ 10Asia၊ 22 February 2010။ 2012-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wee၊ Geun-woo (22 February 2010)။ Interview: Actor Lee Hyun-woo - Part 2။ 10Asia။ 2012-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (6 December 2011)။ BEAST Yoon Du-jun, Lee Hyun-woo to host new music program။ 10Asia။ 2012-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (13 June 2012)။ Lee Hyun-woo to turn soccer player in SHINee Minho, f(x) Sulli's TV series။ 10Asia။ 2012-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Grace Danbi။ "Lee Hyun Woo and Others Confirmed for To the Beautiful You, Korean Hana Kimi Remake"၊ enewsWorld။ 2012-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2012။
↑ Jeong၊ Ju-ri (16 March 2014)။ Lee Hyun Woo visits China for his first solo fan meeting။ StarN News။ 2014-03-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Hye-in (17 March 2014)။ Lee Hyun Woo successfully finishes his first solo China fan meeting။ StarN News။ 2014-03-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sunwoo၊ Carla (6 May 2013)။ Heartthrobs jazz up North Korean spy story။ Korea JoongAng Daily။ 2013-06-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Conran၊ Pierce (11 July 2014)။ LEE Hyun-woo Prepares for BATTLE OF YEONPYEONG။ 2015-05-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Northern Limit Line, most-viewed Korean film of this year (10 July 2015)။ 10 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 이현우, ‘그녀는 거짓말을 너무 사랑해’ 男주인공 확정 [공식입장]။
↑ Gaon Digital Chart (in Korean)။ Gaon Chart။ Korea Music Content Industry Association။ July 1, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 이현우 男 청소년 연기상 수상 (in Korean)။ Asiae (2008-12-31)။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 뉴스타상 이현우 '더욱 멋진 배우가 될게요' (in Korean)။ SBS News (2012-12-31)။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 부일영화상 2015 (in Korean)။ Daum Movie။ 13 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 52nd Daejong Film Awards (Grand Bell Awards) 2015 Nominees။ Hancinema (2015-11-15)။ 2016-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Lee Hyun-woo နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Lee Hyun-woo at awesome.ent
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လီဟွန်းဝူ&oldid=673945" မှ ရယူရန်
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။